RudderStack: Manamboara sehatra manokana momba ny angona mpanjifa (CDP) | Martech Zone
RudderStack manampy ny ekipa injeniera momba ny angona hisambotra lanja bebe kokoa amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa, miaraka amin'ny Platform Data Data (CDP) natao manokana ho an'ny mpamorona. RudderStack dia manangona ny angon-drakitra orinasa isaky ny tohan-kevitry ny mpanjifa - ao anatin'izany ny tranonkala, ny finday ary ny rafitra backend - ary mandefa azy io amin'ny fotoana tena izy ho any amin'ny toerana misy rahona 50 sy trano fitehirizana angona lehibe. Amin'ny alàlan'ny fampiraisana sy famakafakana ny angon-drakitra mpanjifany amin'ny fomba miafina- sy fahatsiarovan-tena amin'ny fiarovana, ireo orinasa dia afaka mamadika azy io ho hetsika asa amin'ny asany rehetra.
Ny CDP nentim-paharazana dia nanandrana namaha ny fanangonana angon-drakitra sy ny fampahavitrihana, saingy indrisy, ny ankamaroan'izy ireo dia manatsara ny olana amin'ny alàlan'ny famoronana silo data fanampiny sy banga fampidirana. Matetika ireo injenieran'ny angona dia mipoitra eo afovoany, mampiasa ampahany fotsiny ny herin'ny fitaovana toa azy ireo Bohabohan'orampanala ary DBT satria ny singa hafa amin'ny stack dia tsy mifangaro amin'ny workflow data lehibe kokoa.
Ny RudderStack dia mametraka ny mpamorona, ny fitaovana tiany, ary ny maritrano maoderina eo alohany sy eo afovoany, manampy ny injenieran'ny angona sy ny orinasan-dry zareo hahita fotoana vaovao matanjaka amin'ny fampifandraisan'izy ireo ireo rafi-pitsikerana ireo sy hampiasana azy ireo hiasa manerana ny fikambanana.
RudderStack Cloud: fomba vaovao hanatonan'ny mpanjifanao angon-drakitra
Iray amin'ireo orinasa voalohany nifindra monina tany RudderStack Cloud dia Mattermost, sehatra fandefasan-kafatra malalaka sy sehatra fiaraha-miasa natsangana ho an'ny tontolo matoky tena. Ny orinasa dia mitantana angon-drakitra marobe ateraky ny mpanjifan'ny orinasany ary nanangana fotodrafitrasa CDP amin'ny fitaovana maoderina, ao anatin'izany ny Snowflake, DBT, ary RudderStack Cloud.
Miaraka amin'ny RudderStack Cloud, nesorinay ny fameperana ny habetsaky ny hetsika ary afaka mandefa ny angona rehetra tianay mankany Snowflake izahay. Azontsika atao ny manadihady sy mihetsika manoloana ireo angon-drakitra manan-danja rehetra ho an'ny mpanjifa, ary amin'ny farany ho lasa orinasa mifantoka amin'ny data. ”
Alex Dovenmuehle, Lehiben'ny injenieran'ny angona, Mattermost
Ny RudderStack Cloud dia manamora ny fampiasan'ny injenieran'ny angona angon-drakitra, manamarina, manova ary mitarika ny angon-drakitra ho an'ny trano fivarotany, serivisy mivantana ary ireo rahona ampiasain'ny ekipa manerana ny orinasa. Anisan'izany ny:
Cloudy maoderina - Natsangana Kubernetes ho an'ny tontolon'ny rahona rahona, mifantoka amin'ny ambaratonga lehibe sy ny fandeferana amin'ny lesoka, miaraka amin'ny fototra ivoahana misokatra, ny mari-trano ho an'ny tsiambaratelo ary ny fitaovana mifantoka amin'ny mpamorona mba hahamora ny fampidirana ny vokatra ao anaty fitehirizanao efa misy, eo am-pitandremana ny fampiasana mora miaraka amin'ny SaaS rahona.
Data Warehouse Centric - RudderStack Cloud dia mamela anao hamadika ny trano fitahirizanao ho CDP miaraka amina endri-javatra toy ny configurable, ny fotoana akaiky ary ny SQL ho loharano iray, izay mamadika ny trano fitahirizanao ho Source RudderStack.
Developer voalohany - RudderStack mino fa ny angona angon-drakitra ho an'ny mpanjifa dia tokony ho an'ny ekipan'ny injeniera, ka izay ny antony mahatonga ny vokatray ho developer hatrany aloha ary mifangaro amin'ireo fitaovana efa ampiasain'izy ireo sy tiany.
RudderStack Cloud no vokatra angon-drakitra mpanjifa mahomby indrindra, mora vidy ary be pitsiny indrindra ho an'ny mpamorona.
Midira amin'ny fitsapana maimaim-poana mandritra ny 14 andro
Tags: cdpSehatra ho an'ny mpanjifafamilianarahona familiana
Swaarm: mandeha ho azy, manatsara, ary refesina ny fahombiazan'ny dokam-barotra